RFID နည်းပညာလုံလုံခြုံခြုံနှင့်ပုဂ္ဂလိကလား? - တရုတ် Dongguan Mk စမတ်ကဒ်
ကံမကောင်းစွာပဲမဟုတျဘဲကအရမ်းမကြာခဏစားသုံးသူထိတွေ့ခံရဖို့များပါတယ်ပေးသောဖို့စနစ်များကိုပါ။ တစ်ဦးသင့်လျော်စွာတပ်ဆင်ထားစကင်နာများနှင့် RFID ကိရိယာအနီးကပ်ဝင်ရောက်ခွင့်ဖြင့်မည်သူမဆိုကိုသက်ဝင်နှင့်၎င်း၏ contents တွေကိုဖတ်နိုင်ကြပါတယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့အချို့စိုးရိမ်မှုများကိုအခြားသူများထက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ကြသည်။ တစ်စုံတစ်ဦးကသငျသညျဝယ်စာအုပ်တွေထဲမှာ RFID devices များကိုသက်ဝင်ကြလိမ့်မည်သည့် RF လယ်ပြင်နှင့်အတူတစ်ဦး 13,56 MHz "sniffer ကို" နှင့်အတူစာအုပ်ဆိုင်ကနေစာအုပ်သင့်ရဲ့အိတ်အားဖြင့်သွားလာနေလျှင်, ထိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသင်ရုံဝယ်သောအရာကိုတစ်ဦးပြည့်စုံစာရင်းကိုရနိုင်။ ဒါကဆက်ဆက်သင့်ရဲ့ privacy ကိုတစ်ခုကျူးကျော်ရဲ့, ဒါပေမယ့်သူကပိုဆိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းအခြားဘက်ခြမ်းမှသာအဆင့်မြင့်အရာရှိတွေရှိလျက်နှင့်အညီပစ်မှတ်ထားနိုင်သောပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော tags များရှာဖွေနေကယ့်မော်တော်ယာဉ်များတို့ကိုစိစစ်ထားတဲ့အတွက်စစ်တပ်အခွအေနေပါဝငျသညျ။
ကုမ္ပဏီများကုမ္ပဏီတံဆိပ်များအတွက် RFID ထုတ်ကုန်များ၏တိုးပွားလာအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုစိုးရိမ်ကြသည်။ သင့်လျော်တဲ့ RF လယ်ပြင်ကမြှင့်လုပ်ဆောင်အကြင်သူ၏ဖို့ "ပဲဖိတ်" ဖို့တံဆိပ်အတွက် RFID ချစ်ပ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်။ ဤအချက်အလက်ပြီးတော့သိမ်းဆည်းထားနှင့်အကွိမျကွိကုမ္ပဏီစကင်နာရန်, သူခိုးကို access ကိုခွင့်ပြုနိုင်ပါသည် - နှင့်သင့်တံဆိပ်အတွက်လက်လှမ်းနှင့်အတူ "အသိအမှတ်ပြု" သောတဦးတည်းဖြစ်၏။
ဖြစ်နိုင်ဖွယ်စားသုံးသူပစ္စည်းများအတွက်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါအသေးဆုံး tags များသင့်ရဲ့ privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဒေတာကိုစာဝှက်စနစ်ပြုပါရန်လုံလောက်သောကွန်ပျူတာပါဝါရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ သူတို့လုပျနိုငျဆုံး PIN ကိုစတိုင်သို့မဟုတ်စကားဝှက်ကို-based ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖြစ်ပါတယ်။
Post ကိုအချိန်: သြဂုတ်-21-2018